Khuphela iividiyo zekhosi ye-Udemy kunye no-Udeler | Ubunlog
Udeler sisixhobo sokukhuphela esivulelekileyo kunye neplatform onokuzikhuphelela ngayo iividiyo zekhosi ye-Udemy kwiPC yakho simahla. Udeler wayenjalo kubhalwe kwi-Electron ukubanomsebenzisi omncinci, ongenantandabuzo kunye nohlobo olufanayo lomsebenzisi kwiLinux, Mac nakwiWindows OS.
Okwangoku, kukho inani lamaziko emfundo akwi-Intanethi. Ezinye zazo zigxila kuphela kwinkqubo kunye nakwizihloko ezinxulumene nezihloko zenzululwazi, ngelixa ezinye zinendawo ebanzi yezihloko. Ezinye iisayithi zisimahla okanye zihlawulwe, kwaye ezinye zibonelela ngezifundo zasimahla nezasimahla.
NjengoKhan Academy kunye neKhowudi Academy, Udemy akangomntu mtsha kule ndawo. Yisiza apho ungafunda khona izifundo ezahlukeneyo ezikwi-Intanethi ngesantya sakho., ezinye zazo zifumaneka simahla.
Ingxaki, nangona kunjalo, kunjalo abasebenzisi ngamanye amaxesha banyanzelwa ukuba balandele iividiyo kuphela xa beqhagamshelwe kwi-intanethi, njengoko kungekho khetho lwasekhaya lokukhuphela iividiyo zekhosi ukuze ubukele kamva, ngakumbi xa umsebenzisi engekho kwi-intanethi.
Ngethamsanqa Nge-Udeler, ungawusombulula lo mda kwaye ubukele iividiyo naphina kwaye nanini na ufuna. Kule nto sinokubonisa uluhlu lwazo zonke iikhosi zakho kunye nokukwazi ukuzikhuphela.
1 Iimpawu zeUdeler
2 Uyifaka njani i-Udeler kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ukukwazi ukukhetha umgangatho wevidiyo
Uyakwazi ukukhuphela iikhosi ezininzi ngaxeshanye.
Misa okanye uphinde uqalise ukhuphelo nangaliphi na ixesha.
Khetha isikhombisi sokukhuphela.
Iilwimi ezininzi (isiNgesi, isiTaliyane, iSpanish)
Kwakhona Umyili wesicelo usixelela into ebaluleke kakhulu kwaye unoxanduva lokusebenzisa usetyenziso:
Le software yenzelwe ukukunceda ukhuphele iikhosi kwi-Udemy ukuze uzisebenzise ngokwakho. Ukwabelana ngomxholo wezifundo zakho ezibhalisiweyo akuvumelekanga ngokungqongqo phantsi kweMigaqo yokuSebenzisa ye-Udemy. Ikhosi nganye ye-Udemy ixhomekeke kulwaphulo-mthetho. Le software ayikhupheli ngomlingo naziphi na iikhosi ezihlawulelweyo ezikhoyo kwi-Udemy, Kuya kufuneka unikezele ngeenkcukacha zakho zokungena kwi-Udemy ukukhuphela iikhosi ozibhalisileyo.
Udeler ukhuphela iividiyo zenkomfa ngokulula usebenzisa umthombo wevidiyo player ebuyiselwe kumsebenzisi ngu-Udemy. Emva kokungqinisisa okufanelekileyo, unokwenza okufanayo ngesandla. Abaphathi abaninzi bokukhuphela basebenzisa indlela efanayo yokukhuphela iividiyo kwiphepha lewebhu. Lolu hlelo lokusebenza luzenzekelayo kuphela xa umsebenzisi esenza oku ngesandla kwisikhangeli sewebhu.
Uyifaka njani i-Udeler kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ukufaka i-Udeler ku-Ubuntu kunye neziphumo, njengoko sele kukhankanyiwe, isicelo sakhiwe ngoncedo lwe-elektron ufakelo luya kwenziwa kwifayile ye-AppImage kwaye oku kuya kuba yinto eya kusinceda sikhuphele iividiyo zekhosi ye-Udemy.
Kule nto Kuya kufuneka sivule i-terminal Ungasebenzisa le ndlela imfutshane CTRL + ALT + T.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukujonga ukuba loluphi na uyilo kwinkqubo yethu, kuba oku sinokuwenza lo myalelo:
Nje ukuba inkqubo yoyilo ichongwe, ngoku kufuneka siye kwiwebhusayithi yeprojekthi kwi icandelo lokukhuphela, siza kukhuphela ifayile ehambelana noyilo lwethu.
Nokuba yakhiwe njani, banokusebenzisa wget ukukhuphelaKuya kufuneka bayenze ngale ndlela ilandelayo, apha ndithatha njengesalathiso soguqulelo lwamva nje olukhoyo.
Solo Kuya kufuneka sinike imvume yokuphumeza kwifayile esandula ukukhutshelwa:
Ekugqibeleni nje sifaka usetyenziso kunye:
Xa uqhuba ifayile okokuqala, uya kubuzwa ukuba uyafuna ukudibanisa inkqubo nenkqubo. Ukuba bakhetha oko, ukuba bafuna ukudityaniswa, isindululi senkqubo siya kongezwa kwimenyu yesicelo kunye neempawu zokufaka. Ukuba bakhetha 'Hayi', kuya kuhlala kufuneka uyiqale ngokunqakraza kabini kwi-AppImage.
Nje ukuba usungule usetyenziso, kuya kuvela ikhusi lokungena ukuze ufake iinkcukacha zakho zeakhawunti ye-Udemy. Nje ukuba kwenziwe, unokufikelela ngqo kwiividiyo zakho zekhosi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Khuphela iividiyo zekhosi ze-Udemy kunye no-Udeler
Ayisebenzi, ihlala "ekwakheni idatha yekhosi"
Sele bechonge ibug kwaye basebenzela ukuyilungisa ngokukhawuleza. Iyibeka kwiwebhu yeGitHub.
UHos ushiye ikhonkco kuye nakubani na ofuna ukuyibona.
ULuis Torres sitsho
Ndingena nge-imeyile kunye negama lokugqitha kwaye ndithi akukho zifundo zifunyenweyo
Phendula uLuis Torres
Enkosi. Uhlaziyo lokugqibela lusebenza ngokugqibeleleyo.
Zingaphi izihlandlo zokukhuphela ikhosi?
Mholo. Xa ndingena kwiakhawunti yam, iikhosi aziveli kwisicelo se-Udeler. Ngaba kungenzeka ukuba iakhawunti yam inesinye isizinda kwiphepha?
Eli phepha lilandelayo apho ndingena khona kwezi zifundo:
Ndiyifakile, kodwa andazi ukuba ndiyiqhuba njani kwisiphelo sendlela.
Molo ndifumana le:
(udeler: 5998): IPango-ERROR **: 14: 25: 18.156: Inguqulelo yeHarfbuzz indala kakhulu (1.4.2)
Ayindivumeli ndingenise igama lam lomsebenzisi, inyani ibonakala ngathi ayisebenzi, ndibeka igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwaye alwenzi nto
U-Udeler sisixhobo esihle kakhulu sokukhuphela iividiyo ze-Udemy, enkosi ngale posi yakho intle!
Nangona kunjalo, ndikhetha ukusebenzisa isiKhupheli seVidiyo ekuSimahla kwiVidiyo kuba andifuni ukufaka isoftware eyongezelelweyo kwikhompyuter yam. Ngaphandle koko, isimahla kwaye kulula ukuyisebenzisa.